အိပျမကျကဇာတျရုံထဲက အမှောငျနစှေဲ့တှကေို ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလား? - ONE DAILY MEDIA
အိပျမကျကဇာတျရုံထဲက အမှောငျနစှေဲ့တှကေို ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလား?
အိပျမကျကဇာတျရုံထဲက အမှောငျနစှေဲ့တှကေိုဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလား?
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျဂြာစီကို ဝတျဆငျပွီးကတညျးက ဘရူနိုဖာနနျဒကျဇျဟာ မှျောဝငျအခိုကျအတနျ့ပေါငျးမြားစှာကို ဖနျတီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အိုးထရကျဖို့ဒျကို စီရျောနယျဒို စတငျရောကျရှိလာတဲ့အခြိနျကနစေလို့ ပျေါတူဂီကှငျးလယျမာစတာဟာ အိပျမကျကဇာတျရုံထဲမှာ ပရိသတျတှေ ကနြေပျလောကျအောငျ အသုံးတျောခံနိုငျခွငျး မရှိတော့ပါဘူး။ နညျးဗြူဟာပိုငျးဆိုငျရာ ဉာဏျရညျမွငျ့မားသူ ၊ ပငျနယျတီစပယျရှယျလဈ ၊ သှငျးဂိုးတှကေို ထုတျလုပျပေးနိုငျသူ စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှကေို တဈသီတဈတနျး ပိုငျဆိုငျထားသူ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈဇျက အသငျးအတှကျနောကျဆုံးပွိုငျပှဲစုံ ပှဲ(၂၀)မှာ ၄ဂိုးသာ သှငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလောကျထိ စှမျးဆောငျရညျကဆြငျးသှားခဲ့ရတာပါလဲ?
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအတှကျ နှဈနှဈနီးပါး တောကျပခဲ့တဲ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈဟာ အသငျးမှာ ဂန်ထဝငျကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈလာမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံရသူပါ။ ဒါ့အပွငျ လကျရှိပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး ကှငျးလယျလူလို့ တငျစားနိုငျတဲ့ ဒီဘရိုငျး ၊ ကှငျးလယျလူတဈယောကျအဖွဈနဲ့ စံခြိနျတငျသှငျးဂိုးတှေ ရယူထားနိုငျတဲ့ ဖရနျ့လမျးပတျ အစရှိတဲ့ ကစားသမားတှနေဲ့လညျး နှိုငျယှဉျခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့လိုခိုငျးနှိုငျးခံရလောကျအောငျလညျး ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက သှငျးဂိုး၂၈ဂိုးအထိ ရယူနိုငျခဲ့တာပါ။
ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ အားသာခကျြက ဂိုးသှငျးမှတျတမျးတဈခုတညျး မဟုတျပါဘူး။ key passတှေ ၊ အခှငျ့အရေးဖနျတီးမှုတှနေဲ့ ဂိုးရဖို့ ပံ့ပိုးမှုစတဲ့ အခကျြအလကျတှအေားလုံးမှာ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈက မှတျတမျးကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့ ကယျတငျရှငျဟီးရိုးတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားရဲ့ အဆငျ့၂နရောမှာ ရပျတညျစနေိုငျခဲ့သလို ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲအထိ ပို့ဆောငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈရာသီလုံးမှာ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈက ပွိုငျပှဲစုံ ၅၈ပှဲကစားပွီး သှငျးဂိုး ၂၈ဂိုး ၊ ဖနျတီးမှု၁၇ကွိမျ ပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့ကာ အသငျးရဲ့ အရေးပါဆုံး ကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီရာသီမှာတော့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အဆငျ့၂ရပွီးသား အသငျးကိုမှ ဗာရနျး ၊ ဆနျခြိုတို့ကို ထပျမံချေါယူနိုငျခဲ့သလို ထာဝရအကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားတဈယောကျဖွဈတဲ့ စီရျောနယျဒိုလို ကစားသမားမြိုးကိုတောငျ အိုးထရကျဖို့ဒျထံ ပွနျလညျပူးပေါငျးအောငျ ချေါဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ ဒီရာသီမှာ ယူနိုကျတကျကို ဆုဖလားအောငျမွငျမှုတှေ ၊ တရစပျနိုငျပှဲတှေ နဲ့ မွငျတှရေ့တော့မယျလို့ ယူဆခဲ့ကွပမေယျ့ ထငျသလို ဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး။ ရာသီအစက မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးကို အဓိကစိနျချေါနိုငျမယျ့အသငျးအဖွဈတောငျ ထငျမှတျခဲ့ကွပမေယျ့ စီရျောနယျဒိုရောကျလာခြိနျမှာတော့ အရာအားလုံး ပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ။
အရငျက ကှငျးလယျကနေ သှငျးဂိုးတှအေတှကျ တာဝနျယူထားရတဲ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ အရာအားလုံးကို စီရျောနယျဒိုက ယူဆောငျသှားခဲ့တာပါ။ ပငျနယျတီကနျသှငျးခှငျ့တှေ ၊ သှငျးဂိုးအတှကျ တာဝနျယူရမှုတှကေို စီရျောနယျဒိုထံ လှဲပွောငျးပေးလိုကျရတဲ့အတှကျ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဂိုးသှငျးမှတျတမျးတှေ တဖွညျးဖွညျး ကဆြငျးလာခဲ့တယျ။ ဒီရာသီ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ သှငျးဂိုး၈ဂိုးမှာ အဖှငျ့ပှဲစဉျတုနျးက ရရှိခဲ့တဲ့ ဟကျထရဈတဈကွိမျသာ ပွောစရာရှိပွီး ကနျြတဲ့အခြိနျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးတှမှော အသငျးဟာ ရလဒျပိုငျးတှေ ကဆြငျးနခေဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ ထောကျပွရမယျ့ အဓိကအခကျြတဈခုက နညျးပွအပွောငျးအလဲပါပဲ။ ယူနိုကျတကျဘုတျအဖှဲ့ဟာ နညျးပွဟောငျးဆိုးလျရှားရဲ့နရောမှာ ဂြာမနျနညျးစနဈဂုရုကွီး ရနျးနဈကို ယာယီနညျးပွအဖွဈ အစားထိုးခနျ့အပျခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့ မူပိုငျ ၄-၂-၂-၂ ကစားကှကျမှာတော့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျး ပွသနိုငျမယျ့ နရောတဈနရော လကျရှိအခြိနျထိ ရှာမတှသေ့ေးပါဘူး။ ဒါဟာ သူ့အတှကျ ပှဲထှကျခှငျ့၁၁ယောကျထဲ ပါဝငျဖို့တောငျ ခကျခဲလာတဲ့ အခွအေနတေဈရပျ ဖွဈနပေါတယျ။ သူ့ရဲ့လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို စီရျောနယျဒိုထံ ပေးအပျလိုကျရခြိနျမှာ နညျးပွဖွဈသူကလညျး သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးနရောတဈနရောကို မပေးနိုငျတဲ့အခြိနျနဲ့ တိုကျဆိုငျနပေါတယျ။
အောငျမွငျနခြေိနျမှာ လကျခုပျသံတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့ရပမေယျ့ ကရြှုံးနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ဝဖေနျသံတှေ မွငျ့တကျလာတာ လူ့လောကရဲ့ ဓမ်မတာပါ။ ဒီအခွအေနကေို ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈတဈယောကျ အကောငျးဆုံးကြျောလှားပွီး တောကျပတဲ့ရှရေောငျနစှေဲ့တှဆေီ အရောကျပွနျသှားနိုငျပါ့မလားဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလှနျးနပေါတယျ။
အိပ်မက်ကဇာတ်ရုံထဲက အမှောင်နေ့စွဲတွေကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလား?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်ပြီးကတည်းက ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဇ်ဟာ မှော်ဝင်အခိုက်အတန့်ပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို စီရော်နယ်ဒို စတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကနေစလို့ ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်မာစတာဟာ အိပ်မက်ကဇာတ်ရုံထဲမှာ ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်လောက်အောင် အသုံးတော်ခံနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူ ၊ ပင်နယ်တီစပယ်ရှယ်လစ် ၊ သွင်းဂိုးတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သူ စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို တစ်သီတစ်တန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဇ်က အသင်းအတွက်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲစုံ ပွဲ(၂၀)မှာ ၄ဂိုးသာ သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားခဲ့ရတာပါလဲ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် နှစ်နှစ်နီးပါး တောက်ပခဲ့တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ အသင်းမှာ ဂန္ထဝင်ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံရသူပါ။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်လူလို့ တင်စားနိုင်တဲ့ ဒီဘရိုင်း ၊ ကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ စံချိန်တင်သွင်းဂိုးတွေ ရယူထားနိုင်တဲ့ ဖရန့်လမ်းပတ် အစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့လည်း နှိုင်ယှဉ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့လိုခိုင်းနှိုင်းခံရလောက်အောင်လည်း ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက သွင်းဂိုး၂၈ဂိုးအထိ ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ အားသာချက်က ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ key passတွေ ၊ အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ဂိုးရဖို့ ပံ့ပိုးမှုစတဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးမှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့်၂နေရာမှာ ရပ်တည်စေနိုင်ခဲ့သလို ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရာသီလုံးမှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က ပြိုင်ပွဲစုံ ၅၈ပွဲကစားပြီး သွင်းဂိုး ၂၈ဂိုး ၊ ဖန်တီးမှု၁၇ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကာ အသင်းရဲ့ အရေးပါဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အဆင့်၂ရပြီးသား အသင်းကိုမှ ဗာရန်း ၊ ဆန်ချိုတို့ကို ထပ်မံခေါ်ယူနိုင်ခဲ့သလို ထာဝရအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုလို ကစားသမားမျိုးကိုတောင် အိုးထရက်ဖို့ဒ်ထံ ပြန်လည်ပူးပေါင်းအောင် ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ကို ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ၊ တရစပ်နိုင်ပွဲတွေ နဲ့ မြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပေမယ့် ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ရာသီအစက မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးကို အဓိကစိန်ခေါ်နိုင်မယ့်အသင်းအဖြစ်တောင် ထင်မှတ်ခဲ့ကြပေမယ့် စီရော်နယ်ဒိုရောက်လာချိန်မှာတော့ အရာအားလုံး ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
အရင်က ကွင်းလယ်ကနေ သွင်းဂိုးတွေအတွက် တာဝန်ယူထားရတဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ အရာအားလုံးကို စီရော်နယ်ဒိုက ယူဆောင်သွားခဲ့တာပါ။ ပင်နယ်တီကန်သွင်းခွင့်တွေ ၊ သွင်းဂိုးအတွက် တာဝန်ယူရမှုတွေကို စီရော်နယ်ဒိုထံ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းတွေ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ ဒီရာသီ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ သွင်းဂိုး၈ဂိုးမှာ အဖွင့်ပွဲစဉ်တုန်းက ရရှိခဲ့တဲ့ ဟက်ထရစ်တစ်ကြိမ်သာ ပြောစရာရှိပြီး ကျန်တဲ့အချိန် သွင်းယူခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးတွေမှာ အသင်းဟာ ရလဒ်ပိုင်းတွေ ကျဆင်းနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ထောက်ပြရမယ့် အဓိကအချက်တစ်ခုက နည်းပြအပြောင်းအလဲပါပဲ။ ယူနိုက်တက်ဘုတ်အဖွဲ့ဟာ နည်းပြဟောင်းဆိုးလ်ရှားရဲ့နေရာမှာ ဂျာမန်နည်းစနစ်ဂုရုကြီး ရန်းနစ်ကို ယာယီနည်းပြအဖြစ် အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ မူပိုင် ၄-၂-၂-၂ ကစားကွက်မှာတော့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်း ပြသနိုင်မယ့် နေရာတစ်နေရာ လက်ရှိအချိန်ထိ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ ဒါဟာ သူ့အတွက် ပွဲထွက်ခွင့်၁၁ယောက်ထဲ ပါဝင်ဖို့တောင် ခက်ခဲလာတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို စီရော်နယ်ဒိုထံ ပေးအပ်လိုက်ရချိန်မှာ နည်းပြဖြစ်သူကလည်း သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်နေရာကို မပေးနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
အောင်မြင်နေချိန်မှာ လက်ခုပ်သံတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ကျရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဝေဖန်သံတွေ မြင့်တက်လာတာ လူ့လောကရဲ့ ဓမ္မတာပါ။ ဒီအခြေအနေကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်တစ်ယောက် အကောင်းဆုံးကျော်လွှားပြီး တောက်ပတဲ့ရွှေရောင်နေ့စွဲတွေဆီ အရောက်ပြန်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းနေပါတယ်။